नाइट क्लब थ’र्काइरहेकी २० वर्षीया लेडी बा’उन्सर – Life Nepali
नाइट क्लब थ’र्काइरहेकी २० वर्षीया लेडी बा’उन्सर
काठमाडौँ। बुधवार अर्थात् ना’इट क्ल’बका लागि ‘ले’डिज ना’इट’। यो रातलाई काठमाडौंका ना’इट क्ल’बहरु ‘युवतीहरुको रा’त’ मा’न्छन्। यो रा’त कतिपय क्ल’बले युवतीहरुलाई विशेष छु’टको व्य’वस्था समेत गर्छन्। यही रा’तको रमझम हेर्न नेपाल ला’इभकर्मी बुधबार रातको ११ बजे ठ’मेलको ट’र्टल ला’उन्ज ए’न्ड क्ल’बमा पुगेको थियो। कोही खानपिन, कोही ना’चगा’न…, सबै आ–आफ्नै दुनियाँमा म’स्त देखिन्थे।
यो रंगिन दुनियाँमा एक थिइन्, जसको अ’नुहारको र’ङ खा’स उज्यालो थिएन, न मु’स्कुराहट नै थियो। एक ठाउँ उभिएर निरन्तर क्ल’बको डा’न्स फ्लो’रको मा’होल निया’लिरहेकी थिइन्। सायद एउटै कुराको चि’न्ता थियो- सबै मि’लेर खा’ऊन्, मिलेर ना’चून्, को’ही झ’गडा न’गरुन्, को’ही खा’एर न’लडू’न्।
मा दक प दार्थको तालमा ल’ठ्ठिएर नाचिरहेका युवा-युवतीलाई उनी सम्झाइरहेकी थिइन्, ‘थोरै यता सर्नु ल, थोरै उता ल।’ सा’यद नाच्दा-नाच्दै या खाँदा-खाँदै कसैलाई पि’साबले च्या’प्थ्यो। नाँचिरहेको व्यक्ति उनी नजिक आइपुग्थ्यो र सो’ध्थ्यो- ‘ट्वा’इलेट कता छ?’ उनी ‘यता छ’ भन्दै बाटो देखाइदिन्थिन्।
म्युजिकको आवाजले बोलेको केही बुझिन्थेन। तर, र’क्सी पिएर ‘ल्याङ गर्नेहरु’ उस्तै। ग्रा’हकहरु उनको का’नैमा पुगेर केही भनिरहेका हुन्थे। अनुहारको भा’व हेर्दा प्रष्टै झ’ल्किन्थ्यो, उनलाई कसैले जि’स्क्यायो। तर उनी रि’साएर झ’म्टिएकी छैनन्। सायद उनको कामै हो ‘स’हनशील हुनु’। एक पल्ट एक जना ग्रा’हक आए, जसले सुरुमा नाम सोधे, बस्ने ठेगाना सोधे। सोध्दासोध्दै हिम्मत यति बढ्यो कि, सिधै मोबाइल नम्बर नै मागे। तर, उनले ‘दिन मिल्दैन’ भन्दै पन्छाइन्।
का’लो ज्या’केट, कालो पा’इन्ट लगाएर क्ल’बमा ग्रा’हकको सु’रक्षार्थ अहोरात्र ख’टिरहे’की ती युवती थिइन्, २० वर्षीया प्रेमिता ला’मा। जो एक वर्षदेखि काठमाडौंका ना’इट क्ल’बमा ‘झ्या’प’ केटाहरुलाई थ’र्काइरहेकी छन्, क्ल’बमा हुने केटीहरुको झ’गडा मिलाइरहेकी छन्, ‘बा’उन्सर’का रुपमा।
डि’स्कोमा ‘ले’डी बा’उन्सर’ रा’ख्ने चलन करिब ४ वर्षअघि दरबारमार्गमा रहेको ‘डे’जाभु ना’इट क्ल’ब’बाट सुरु भएको बताउँछन्, सेभेन स्टार बा’उन्सर एन्ड से’क्युरिटी स’र्भिसका कार्यकारी निर्देशक रुद्र लिम्बु। उ’नको कम्पनीले लामो समयदेखि काठमाडौंमा बा’उन्सर र से’क्युरिटी स’प्लाई गर्ने काम गरिरहेको छ।
अहिले राजधानीमा दर्जन बढी नाइट क्लबले कम्तीमा एक जना ‘लेडी बा’उन्सर’ राखेकै छन्। रु’द्रका अनुसार राजधानीमा तीन दर्जन बढी ले’डी बा’उन्सर छन्। ‘अहिले क्ल’बमा केटीहरुको उपस्थिति ब’ढ्दो छ। सँगसँगै र’क्सी खा’एर ल’फ’डा गर्ने पनि अ’चेल के’टाभन्दा केटी बढी देखिन थाले। त्यसैले ना’इट क्ल’ब’मा लेडी बा’उन्सर राख्ने चलन ब’ढिरहेको हो,’ उनले सुनाए।
अब फर्कौं प्रेमितातिरै। नुवाकोट, ककनीकी उनी सानोमा निकै डरपोक थिइन्। कतै झगडा परिरहेको देख्दा परैबाट भाग्थिन्। र, संयोग कस्तो भने आज उनै प्रेमिता दि’नहुँ क्ल’बमा हुने झ’गडा मि’लाइरहेकी छिन्, केटीहरुलाई मात्रै होइन, आ’वश्यक परे केटाहरुलाई पनि थ’र्काइरहेकी छिन्। प्रमिता तीन वर्षअघि प्लस टुको पढाइ सकेर गाउँबाट सहर आएकी थिइन्,
उच्च शिक्षा हा’सिल गर्ने अभिलाषासहित। काठमाडौंमै रहेका दाजुभाउजुसँगै बसेर पढाइ अघि बढाउने नि’धो भयो। डे’रानजिकै रहेको नेपालटारस्थि’त ग्रा’मीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन संकायमा स्नातक भर्ना भइन्। उनलाई ‘पकेट खर्च’ चलाउन दिनहुँ दाजु-भाउजुसँग पैसा माग्नुपर्थ्यो। दुई वर्ष त यसैगरी च’ल्यो तर त्यसपछि उनलाई म’हसुस भयो- यसरी त चल्दैन, दाजु-भाउजु पनि दि’क्क मा’न्न था’लिसके। त्यसपछि उनले निर्णय गरिन्- अब जा’गिर गर्छु। काठमाडौंमा जागिर पाउन कहाँ सजिलो छ र!
अनेक प्रयास गरिन् तर खोजेजस्तो, सोचेजस्तो जागिर पाइनन्। कतै रिसेप्सन, कतै फाइनान्समा कलेक्टरको जागिर त मिल्ने भयो तर तलब ७-८ हजार। ‘यति थोरै तलबले कसरी टिकिएला र काठमाडौंमा !’, त्यसैले नगर्ने निर्णय गरिन्। जागिरको खोजीमा भौं’तारिरहेकै बेला घरछेउका से’क्युरिटी गा’र्डको काम गर्ने छिमेकी दाइले एक दिन प्रस्ताव गरे- ‘बा’उन्सर काम गर्छौ त?’
‘फेरि के हो यो बाउन्सर भन्या,’ उनले के जागिरको अफर हो, त्यो नै बुझिनन्। ती दाइले प्रष्ट्याए- ‘ना’इट क्लब’मा काम गर्ने हो। त्यहाँ धेरै जाँ’डर’क्सी खाने मा’न्छे हुन्छन्। उनीहरुलाई सु’रक्षा दिने काम हो।’ ना’इट क्ल’ब भन्नेवि’त्तिकै उनलाई काम गर्न मन लागेन। परिवारले पनि अनुमति दिने कुरा थिएन।
‘तैपनि एक पल्ट बुझी हेर न,’ ती गार्ड दाइले उनलाई सुझाए। बुझ्नुअघि उनले गाउँकै एक जना नाइट क्लबमा काम गर्ने वेटर दाइलाई सोधिन्, ‘क्ल’बमा बा’उन्सर काम राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, दाइ?’ ‘राम्रै हुन्छ, त्यस्तो आ’त्तिनुपर्ने केही हुँदैन,’ भन्ने जवाफ आएपछि उनको मन थोरै सका’रात्मक हुन थाल्यो।
त्यसपछि बा’उन्सर जा’गिर ल’गाइदिने कम्प’नी ‘सेभेन स्टा’र’को कार्यलय धुम्बाराही (काठमाडौं) पुगिन्। त्यहाँ काम सुरु गर्नुअघि सात दिनको ता’लिम लिनुपर्ने बताइयो। ता’लिममा क’राँते, जि’म सबै सि’काइयो। ग्रा’हकले नि’हुँ खोजे उनीहरुलाई क’सरी सु’रक्षितसँग बाहिर नि’काल्ने? झग’डा भयो भने क’सरी छु’ट्याउने? चो’ट न’लाग्ने’गरी क’सरी ‘ल’क’ लगाउने? सात दिनको ता’लिममा उनले यो सब तरिका सि’किन्।
‘सि’काउने क्रममा हामीलाई नै लक लगाइदिनुहु’न्थ्यो, त्यसो हुँ’दा श’रीर खु’ब दु’ख्थ्यो,’ प्रेमिता सम्झिन्छन्। हाम्रो समाज अझै पनि छोरी मा’न्छेले रा’तबिरात हिँ’डेको रु’चाउँदैन। प्रेमितालाई पनि बाआमाले क’हिल्यै रा’ति हिँ’ड्न दिएनन्। सधैँ भन्थे- ‘छोरी मान्छे भएर रा’तबि’रात हिँ’ड्नु रा’म्रो होइन।’ सं’योग नै भनौं, कुनै बेला रा’ति हिँ’ड्न अनु’मति न’पाउने प्रेमिता आज रा”तभर ना’इट क्ल’बमा ड्युटी गरिरहेको भेटिन्छिन्। उनको नि’यमित ड्यु’टी सि’नेट क्ल’बमा हो।
कहिलेकाहिँ क’म्पनीले अरु क्लबमा पनि पठाउने गर्छ। संवाददाताले त्यही क्रममा उनलाई बुधबार टर्टल क्लबमा भेट्यो। भेटमा थाहा भयो, उनले काम सुरु गरेको तीन महिना आफूले नाइट क्लबमा काम थालेको गाउँमा बाआमालाई खबर नै गरिनन्। डर थियो, बाआमाले गर्न नदेलान् भन्ने। तर काठमाडौंमा टि’क्न पैसाको एकदमै खाँ’चो थियो।
सुरुमा त दाजु-भाउजु, साथीसँगी कसैले पनि उनलाई क्लबमा काम गर्छु भन्दा सहमति जनाएनन्। ‘त्यस्तो ठाउँमा काम नगर, राम्रो हुँदैन’ भने। तैपनि उनले सम्झाइ-बु’झाइ गरेर काम थालिन्। ‘अहिले तिनै साथीभाइ ना’इट क्ल’ब भनेपछि हु’रुक्कै हुन्छन्,’ प्रेमिता हाँस्दै सु’नाउँछिन्।
तीन महिनापछि उनले गाउँमा बाआमालाई ना’इट क्ल’बमा काम गरिरहेको पत्तो दिइन्। ‘छोरी राति-राति डि’स्कोमा काम गर्न जान्छे’ भनेको सुन्दा सुरुमा त खुब रिसाउनुभयो उहाँहरु। ‘तर, मैले त्यस्तो नराम्रो केही हुँदैन भनेपछि मान्नुभयो,’ उनले सुनाइन्। प्रेमिता बा’उन्सर बनेर पहिलो दिन क्ल’ब पुग्दाको अनुभव नै यादगार छ। फरेनाइट क्ल’बमा थियो उनको ड्युटी। जाँ’डर’क्सी खा’एका मा’न्छे छेउ-छे’उमा आउँदा अरुलाई सु’रक्षा दि’न ब”सेकी उनी आफैं ड’राइरहेकी थिइन्।
कसैले केही भन्ला कि भन्ने डर! नराम्रो सोच्ला कि भन्ने डर! त्यसमाथि जागिर सुरु गरेको पहिलो दिन नै दुई युवतीको फा’इट परेछ। दुवै एकअर्काको क’पाल भुताल्न थालेछन्। प्रेमितालाई झ’गडा छु’ट्याउन निकै सकस भयो। ‘तर, लक लगाउन सिकेकी थिएँ, त्यसैले झ’गडा छु’टाउन सकेँ,’ उनले स’म्झिइन्। ‘काम सुरु गरेको पहिलो दिन नै झ’गडा भएपछि काम छो’डेर भा’ग्न म’न लागेन?,’ हामीले सो’ध्यौँ। ‘त्यस्तो त ला’गेन, जे होस् बा’उन्सर काम रि’स्क रैछ भन्ने फि’ल चाहिँ भयो,’ उनले भनिन्।
‘अहिलेसम्म कतिवटा झ’गडा छु’ट्याइयो, याद छ?’‘कहाँ याद हुनु? क्लबमा त्यस्तो सा’मान्य झ’गडा त दिनहुँ हुन्छ नि, गनेर साध्य हुन्न’ उनको सरल उत्तर थियो। ‘झ’गडा प’र्दा क’हिल्यै भा’गिएको छ?’ ‘क’हाँ भा’ग्नु? भा’ग्यो भने त जा’गिर ग’इहा’ल्यो नि। हाम्रो काम नै ग्राहकलाई सु’रक्षा दिने हो, भा’ग्यो भने त स’क्किगो नि,’ उनी मु’स्कुरा’उँदै निर्ध’क्क ज’वाफ दिन्छिन्।
एक महिना अघिमात्रै एक युवतीले र’क्सी पि’एर नि’कै ‘ल्या’ङल्या’ङ’ गरिछन्। बाहिर निकाल्न खोज्दै उल्टै उनको क’पाल भु’तालेर उ’खाल्दि’छन्। ‘यस्तो त सा’मान्य हो, स’हनुपर्छ,’ प्रे’मिता भन्छिन्, ‘कोही पख तँलाई भोलि बाटो छेकेर कु’ट्छु भन्छन्। सुरुसुरुमा त साँ’च्चिकै कु’ट्लान् कि भन्ने ड’रले अर्कै बाटो लुकी-लुकी पनि घर गइ’न्थ्यो।’
साँझ ७ बजे बसको यात्रा गर्दै क्ल’ब पुग्ने। बिहानको ६ बजेसम्म लगातार उभिएर ड्यु’टी गर्ने। लगत्तै कोठा पुगेर कलेजको ड्रे’स ल’गाउने। क’लेज जा’ने। कलेजबाट फर्कनेबित्तिकै ड्रेस नखो’लिकनै सु’त्ने। साँझ ५-६ बजेसम्म सुतेर नि’न्द्रा पुर्‍याउने। अनि, फेरि ड्युटीमा जाने तयारी गर्ने। यो प्रेमिताको ‘डे’ली सेड्युल’ हो। रा’तभर क्ल’बमा ड्युटी गरेर खुब थाकेकी हुन्छिन् उनी। उभिँदा-उभिँदा खु’ट्टा दु’खेको हुन्छ। नि’न्द्राले उस्तै स’ताएको हुन्छ।
तैपनि रात’भरको थ कान बि’र्सिएर पढ्नलाई कलेज जा’न्छिन् उनी। ‘थाक्न त बे’स्सरी था’किन्छ नि, तर के गर्नु पढ्नै पर्‍यो,’ उनी भन्छिन्, ‘कसलाई यसरी आराम नगरी-नगरी दुःख गर्न मन हुन्छ र? तर, बाध्यता भएपछि मान्छेले जिन्दगीमा जे पनि गर्छ।’ बिहान कलेज पुग्दा हरेक दिन उनको पहिलो पि’रियड छु’ट्छ। कहिलेकाहिँ नोट सा’र्दासा’र्दै कक्षामा नि’दाइदि’न्छिन् उनी। त्यसपछि स’रको गा’ली।
घर पुगेर खाना न’खाइ सु’त्छिन्। साँ’झ उ’ठेर पनि केही खा’न्नन्। सिधैँ क्ल’ब पुगेर ८ बजे खाना अनि रा’तको १ बजे खा’जा। यही ‘अ’स्तव्य’स्त’ सूची’ नै उनको जीवनको हि’स्सा भइस’क्यो। कति यु’वतीले बी’चमै का’म छो’डिसके तर उनी निरन्तर यही पेसामा लागिरहेकी छन्। छो’ड्ने सोच पनि बनिसकेको छैन। भन्छिन्, ‘अहिले लेडी बा’उन्सरको मा’ग बढिरहेको छ। सकियो भने भविष्यमा ले’डी बा’उन्सरको स’र्भिस दिने कम्प’नी नै खोल्छु।’
‘लेडी बा’उन्सर’लाई ना’इट क्ल’बमा का’म गर्न सहज छैन। जँ’ड्याहा ग्रा’हकका अ’नेक व्य’वहार उनीहरुले सहनुपर्छ। ‘प्रायः ग्रा’हकले जाँ ड-र क्सी खा’एकै हुन्छन्,’ प्रे’मिता भन्छिन्, ‘मु’ख छा’ड्नेहरु उस्तै हुन्छन्। कोही-कोही गे’ष्ट सिधै ‘यति पै’सा दिन्छु, म’सँग जाउँ न’ भन्छन्। तर के गर्ने, गेष्ट हो कु’ट्न मिलेन, सह’नैपर्छ। अति भयो भनेचाहिँ गा’ली ग’र्दिन्छु अनि सा’इड लाग्छु।’
उनले यो एक वर्षको दौ’रानमा खालखालका ग्रा’हक भेटेकी छन्। कोही त जागिरको प्रलोभन नै देखाउँछन् रे। ‘यति थोरै तलब भएको ठाउँमा काम नगर, अर्को राम्रो तलब भएको ठाउँमा काम मिलाइदिन्छु तर यसको बदलामा मसँग क’म्प्रमाइज गर्नुपर्छ भन्दै आइरहेका हुन्छन्, कुरा सु’न्दा पनि हाँ’सो उठ्छ,’ उनी सुनाउँछिन्।
ड्युटीमा उभिइरहेका बेला ‘नाम के हो’, ‘कहाँ बस्छौ’ भन्ने त कति हुन्छन्, कति। मोबाइल नम्बर माग्ने त दैनिक घटीमा पाँच जना। ‘बि’यर खाने हो?’ भनेर सोध्ने गे’ष्टहरु त गनिसाध्य हुन्न। कति त छेउछेउमा आएर छुन पनि खो’ज्छन्। तर, तिनीहरुलाई उनी सिधै थर्का’इदि’न्छिन्। त्यति गर्दा पनि टे’रेनन् भने छे’उमा रहेका पुरुष बा’उन्सरलाई भनेर ठेगान ला’उँछिन्।
तर, सबैलाई ड्यु’टी टा’इममा मि’ल्दैन भन्दैन प’न्छा’इदि’न्छिन् उनी। केटीहरुको झ’गडा’मात्रै’ होइन, उनीहरुको केटाहरुको ठूल्ठू’ला झ ग’डामा पनि ‘स’पोर्ट’का लागि पु’ग्छिन्। ‘सु’रुसु’रुमा त ड र ला’ग्थ्यो, अहिले त केहीजस्तो लाग्दैन,’ उनी भन्छि’न्, ‘छोरी मा’न्छे भए पनि आ’फूलाई क’मजोर ठा’न्दिनँ। आफू क’मजोर छु जस्तो ला’ग्दैन। उस्तै परे ३-४ जना के’टीहरुलाई ए’क्लैले ठे’गान ला’उन स’क्छु। केटाहरु पनि निहुँ खो’ज्दै आए पनि डि’फेन्स गर्न सकिन्छ।’ -नेपाल लाईभ बाट
Previous मध्यपहाडी क्षेत्रमा मात्र पाइने अनौठो जनावर सालक सिरहामा भेटियो
Next बाँदरले है’रान बनाएपछि किसानले लगाए ग’ज्जबको आइडिया